အေဘရာမိုဗစ်ခ်ျပြီးရင် နောက်တစ်ယောက်က မန်စီတီးသူဌေးလား ? နယူကာဆယ်သူဌေးလား ? - Barnyar Barnyar
March 31, 2022 နိုင်ငံတကာ 0
နောက်တစ်ယောက်က မန်စီတီးသူဌေးလား ? နယူကာဆယ်သူဌေးလား ?
မောင်ယဿ ( မတ် ၃၁ )
ချယ်ဆီးအသင်းပိုင်ရှင် အေဗရာမိုဗစ်ခ်ျက ရုရှားအစိုးရအသိုင်းအဝိုင်းနဲ့ နီးစပ်တဲ့သူ ဖြစ်တဲ့အတွက် ရုရှားက ယူကရိန်းကို စစ်ရေးအရ အရေးယူတဲ့ အခါမှာတော့ ဗြိတိန်အစိုးရက ချယ်ဆီးအသင်းနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို ထိန်းချုပ်ပြီး မိုဗစ်ခ်ျကို အင်္ဂလန်ဘောလုံးလောကကနေ ကန်ထုတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။
အားကစားလုပ်ငန်းက ရင်းနှီးမြုတ်နှံမှု လုပ်ဖို့ကောင်းတဲ့ စီးပွားရေးဖြစ်နေတော့ မိုဗစ်ခ်ျရဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ ရုရှားအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေ ဒါမှမဟုတ် ရုရှားသမ္မတ ဗလာဒီမာပူတင်ရဲ့ ပိုက်ဆံတွေ ပါကောင်း ပါနိုင်မှာပါ။ ဒါကြောင့် ယူကရိန်းကို ကျူးကျော်တယ်လို့ ဗြိတိန်အစိုးရက သုံးသပ်တဲ့အတွက် အင်္ဂလန်မှာ ရုရှားသူဌေးတွေလာပြီး မြုပ်နှံထားတဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို ထိန်းသိမ်းလိုက်တာပါ။
ချယ်ဆီး အမျိုးသားအသင်း နဲ့ အမျိုးသမီး အသင်းတွေကို ပြိုင်ပွဲမှာ ဆက်ကစားခိုင်းထားပေမဲ့ ချယ်ဆီးရဲ့ ရပ်တည်မှုက မသေချာတော့ပါဘူး ။ ၂၀၀၃ ခုနှစ်ကတည်းက ချယ်ဆီးကို ဝယ်ပြီး သူ့စိတ်ကြိုက် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု လုပ်ခွင့်ရလိုက်လို့ မိုဗစ်ခ်ျက ချယ်ဆီးကို ပရီမီးယားလိဂ်ရဲ့ ဖျက်မြင်းအသင်းအဆင့်ကနေ ပရီးမီးယားလိဂ် ဖလား ၅လုံး နဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်ဖလား ၂လုံး ရအောင် စွမ်းဆောင် နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
အခုတော့ ပရီမီးယားလိဂ်က ကမ္ဘာအရပ်ရပ်က သူဌေးတွေ လာပြီး ရင်းနှီးမြုပ်နှံဖို့အတွက် စိုးရိမ်စရာ ကောင်းတဲ့ အခြေအနေမှာ ဖြစ်သွားပါပြီ ။ ပရီမီးယားလိဂ် အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် ရစ်ချက်မာစတာကတော့ “ ကျနော်တို့ ပိုပြီး စစ်ဆေးဖို့ လိုတော့မယ် ၊ ပိုပြီး ပွင်လင်းမြင်သာမှု ရှိရတော့မယ် ၊ လူတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ အနေအထားကို စမ်းသပ်ဖို့ ပိုလုပ်ရတော့မယ်” လို့ ဆိုလာပါတယ်။
လက်ရှိမှာက ရုရှားအစိုးရနဲ့ မကင်းရာမကင်းကြောင်း ဖြစ်နေတဲ့ ဆော်ဒီ နိုင်ငံက သူဌေးတွေကလည်း နယူကာဆယ်ကို ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု လုပ်ထားတယ် ။ ဆော်ဒီမင်းသား ဆယ်လ်မန်က နယူကာဆယ်ကိုဝယ်တဲ့ လုပ်ငန်းအုပ်စုမှာ ဥက္ကဌ ဖြစ်ပါတယ်။ ယီမင်နိုင်ငံရဲ့ ပြည်တွင်းစစ်မှာ ဆော်ဒီက တစ်စိတ်ပိုင်းမက ပါဝင်နေတော့ နိုင်ငံရေးပြဿနာက နယူကာဆယ် အပေါ်ကို သက်ရောက်လာနိုင်ပါတယ်။
အဲ့လိုပဲ မန်စီတီးပိုင်ရှင် ရှိတ်မန်ဆာက UAE ဝန်ကြီးချုပ်ပါ ။ UAE မှာက လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှု အများကြီး ရှိနေတယ်ဆိုပြီး အနောက်အုပ်စုရဲ့ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အဖွဲတွေက ဝေဖန်မှုတွေ အများကြီး ရှိနေပါတယ်။
ရုရှားကို အနောက်အုပ်စုရဲ့ သဘောအတိုင်း စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှု လုပ်တာတွေ အောင်မြင်သွားရင်တော့ ရှေ့တစ်လှမ်းတိုးပြီး နယူးကာဆယ် နဲ့ မန်စီတီးတို့ရဲ့ သူဌေးတွေကို ပိုင်ဆိုင်မှု ချိတ်ပိတ် ခံရနိုင်ဖွယ် ရှိနေပါတယ်လို့ ဆိုရမှာပါပဲ ။
အဘေရာမိုဗဈချြပွီးရငျ နောကျတဈယောကျက မနျစီတီးသူဌေးလား ? နယူကာဆယျသူဌေးလား ?
မောငျယဿ ( မတျ ၃၁ )
ခယျြဆီးအသငျးပိုငျရှငျ အဗေရာမိုဗဈချြက ရုရှားအစိုးရအသိုငျးအဝိုငျးနဲ့ နီးစပျတဲ့သူ ဖွဈတဲ့အတှကျ ရုရှားက ယူကရိနျးကို စဈရေးအရ အရေးယူတဲ့ အခါမှာတော့ ဗွိတိနျအစိုးရက ခယျြဆီးအသငျးနဲ့ ပတျသတျတဲ့ ပိုငျဆိုငျမှုတှကေို ထိနျးခြုပျပွီး မိုဗဈချြကို အင်ျဂလနျဘောလုံးလောကကနေ ကနျထုတျပဈလိုကျပါတယျ။
အားကစားလုပျငနျးက ရငျးနှီးမွုတျနှံမှု လုပျဖို့ကောငျးတဲ့ စီးပှားရေးဖွဈနတေော့ မိုဗဈချြရဲ့ စီးပှားရေးလုပျငနျးတှမှော ရုရှားအစိုးရအဖှဲ့ဝငျတှေ ဒါမှမဟုတျ ရုရှားသမ်မတ ဗလာဒီမာပူတငျရဲ့ ပိုကျဆံတှေ ပါကောငျး ပါနိုငျမှာပါ။ ဒါကွောငျ့ ယူကရိနျးကို ကြူးကြျောတယျလို့ ဗွိတိနျအစိုးရက သုံးသပျတဲ့အတှကျ အင်ျဂလနျမှာ ရုရှားသူဌေးတှလောပွီး မွုပျနှံထားတဲ့ ပိုငျဆိုငျမှုတှကေို ထိနျးသိမျးလိုကျတာပါ။
ခယျြဆီး အမြိုးသားအသငျး နဲ့ အမြိုးသမီး အသငျးတှကေို ပွိုငျပှဲမှာ ဆကျကစားခိုငျးထားပမေဲ့ ခယျြဆီးရဲ့ ရပျတညျမှုက မသခြောတော့ပါဘူး ။ ၂၀၀၃ ခုနှဈကတညျးက ခယျြဆီးကို ဝယျပွီး သူ့စိတျကွိုကျ ရငျးနှီးမွုပျနှံမှု လုပျခှငျ့ရလိုကျလို့ မိုဗဈချြက ခယျြဆီးကို ပရီမီးယားလိဂျရဲ့ ဖကျြမွငျးအသငျးအဆငျ့ကနေ ပရီးမီးယားလိဂျ ဖလား ၅လုံး နဲ့ ခနျြပီယံလိဂျဖလား ၂လုံး ရအောငျ စှမျးဆောငျ နိုငျခဲ့ပါတယျ။
အခုတော့ ပရီမီးယားလိဂျက ကမ်ဘာအရပျရပျက သူဌေးတှေ လာပွီး ရငျးနှီးမွုပျနှံဖို့အတှကျ စိုးရိမျစရာ ကောငျးတဲ့ အခွအေနမှော ဖွဈသှားပါပွီ ။ ပရီမီးယားလိဂျ အမှုဆောငျအရာရှိခြုပျ ရဈခကျြမာစတာကတော့ “ ကနြျောတို့ ပိုပွီး စဈဆေးဖို့ လိုတော့မယျ ၊ ပိုပွီး ပှငျလငျးမွငျသာမှု ရှိရတော့မယျ ၊ လူတဈဦးခငျြးစီရဲ့ အနအေထားကို စမျးသပျဖို့ ပိုလုပျရတော့မယျ” လို့ ဆိုလာပါတယျ။
လကျရှိမှာက ရုရှားအစိုးရနဲ့ မကငျးရာမကငျးကွောငျး ဖွဈနတေဲ့ ဆျောဒီ နိုငျငံက သူဌေးတှကေလညျး နယူကာဆယျကို ရငျးနှီးမွုပျနှံမှု လုပျထားတယျ ။ ဆျောဒီမငျးသား ဆယျလျမနျက နယူကာဆယျကိုဝယျတဲ့ လုပျငနျးအုပျစုမှာ ဥက်ကဌ ဖွဈပါတယျ။ ယီမငျနိုငျငံရဲ့ ပွညျတှငျးစဈမှာ ဆျောဒီက တဈစိတျပိုငျးမက ပါဝငျနတေော့ နိုငျငံရေးပွဿနာက နယူကာဆယျ အပျေါကို သကျရောကျလာနိုငျပါတယျ။
အဲ့လိုပဲ မနျစီတီးပိုငျရှငျ ရှိတျမနျဆာက UAE ဝနျကွီးခြုပျပါ ။ UAE မှာက လူ့အခှငျ့အရေး ခြိုးဖောကျမှု အမြားကွီး ရှိနတေယျဆိုပွီး အနောကျအုပျစုရဲ့ လူ့အခှငျ့အရေးဆိုငျရာ အဖှဲတှကေ ဝဖေနျမှုတှေ အမြားကွီး ရှိနပေါတယျ။
ရုရှားကို အနောကျအုပျစုရဲ့ သဘောအတိုငျး စီးပှားရေးပိတျဆို့မှု လုပျတာတှေ အောငျမွငျသှားရငျတော့ ရှတေ့ဈလှမျးတိုးပွီး နယူးကာဆယျ နဲ့ မနျစီတီးတို့ရဲ့ သူဌေးတှကေို ပိုငျဆိုငျမှု ခြိတျပိတျ ခံရနိုငျဖှယျ ရှိနပေါတယျလို့ ဆိုရမှာပါပဲ ။